सुनको भाउ आकाशिएको बेला सुनकै ग्रह भेटियो ! - Kavre Online
सुनको भाउ आकाशिएको बेला सुनकै ग्रह भेटियो !
September 4, 2019 by admin
अमेरिका । वैज्ञानिकहरुले न्युट्रोन स्टारहरु ठोक्किएको करिब दुई वर्षपछि यसबाट ठूलो मात्रामा सुन र प्लाटिनम उत्पन्न भएको पत्ता लगाएका छन् । रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले आफ्नो मासिक जर्नलमा सुन र प्लाटिनमका सयौं ग्रह उत्पन्न भएको भन्दै एक अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । सन् २०१७ मा दुई तारा ठोक्किएका थिए । सन् २०१६ मा पनि यस्तै घटना भएको थियो । त्यसैले यस घटनामा उनीहरुले विशेष ध्यान दिए । यसबाट दुई सूक्ष्म तारा ठोक्किएर विलय भएर किलोनेभा उत्पन्न भएको उनीहरुले बताए ।
ठूला तारा विस्फोट भएपछि अथवा टुक्रिएपछि ताराको बचेको अवशेषलाई न्युट्रोन स्टार अथवा सूक्ष्म तारा भनिन्छ । न्यूट्रोन स्टार ब्ल्याक होलमा मिले पनि किलोनोभाको निर्माण हुन्छ । सन् २०१६ र २०१७ भएको न्युट्रोन स्टारको टकराबले ठूलो मात्रामा सुन र प्लाटिनम उत्पन्न भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सुनको यो भण्डार ग्यालेक्सी एनजीसी ४९९४ मा पाइन्छ । यो पृथ्वीभन्दा १३० देखि १४० प्रकाशवर्ष टाढा छ । अर्थात् आजभन्दा करीब १३ देखि १४ करोड वर्ष पहिले दुई न्युट्रोन स्टार ठोक्किएका थिए । ग्यालेक्सी एनजीसी ४९९४ मा कति सुन छ भनेर हाल अनुमान गर्न नसकिए पनि टकरावबाट निकै धेरै सुन र प्लाटिनमका पिण्ड बनेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
पृथ्वीमा सुन र प्लाटिनम कसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुरामा यस अध्ययनले मद्दत गर्ने वैज्ञानिकहरुको मान्यता छ । पृथ्वीको गर्भमा केकति सुन र अन्य बहुमूल्य धातु छन् भनेर अझै स्पष्ट तथ्यांक छैन । पृथ्वीमा पाइने यी बहुमूल्य धातु लाखौं वर्षपहिले निर्माण भएको किलोनोभाकै परिणाम रहेको उनीहरुको अनुमान छ । पृथ्वीमा हालसम्म उत्खनन गरिएको सुन करिब २० घनमिटरको ट्यांकीमा अट्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
70 Post Views
Posted in बिज्ञान प्रबिधि
Prevरानू मण्डलको चर्चाबारे लता मंगेशकर यसो भन्छिन्
Nextरवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतको आयो यस्तो आदेश
घटनापछि चो#टै-चोट लागेको शरीर लिएर ज्ञानेन्द्र शाही पहिलो पटक मिडियामा,गरे डरलाग्दो खुलासा (हेर्नुहोस भिडियो)
प्रहरीका सई कुट्ने पूर्वयुवराज पारस शाहले दिए यस्तो स्पष्टीकरण, सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला
अविवाहित जोडीलाई होटलमा बस्‍न खुल्ला गरेपछि १० दिनमै भित्रिए २४ हजार पर्यटक
पुडासैनीको भिडियो आफैंले मात्र नभइ अरु कसैको सहयोगमा रेकर्ड